Golaha ammaanka QM oo kordhiyay cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya | Dayniile.com
Home Warkii Golaha ammaanka QM oo kordhiyay cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya
Golaha ammaanka QM oo kordhiyay cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay hubka qarsoodiga ah ee ay helaan AlShabaab, taasoo ay sheegeen in ay xadgudub ku tahay cunno-qabteynta hubka ee Qaramada Midoobay kusoo rogtay Soomaaliya.
Golaha ammaanku waxay u codeeyeen in muddo sannad ah lagu kordhiyo muddada xayiraadda hubka ee saaran Soomaliya, iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada xiriirka la leh Al-Qaacida ay sii wadaan inay carqaladeeyaan xasilloonida Soomaaliya.
Bishii Juun 2001 Qaraarkii Golaha Amaanka ee tirsigiisu ahaa 1356 ayaa oggolaaday in Soomaaliya laga dhaafo cunaqabateynta sahayda qalabka militariga ee aan wax dilin si loogu isticmaalo hawlaha bani’aadanimo
Previous articleDagaal khasaaro geystay oo ka dhacay Walanweyn & Maamulka KGS oo ka hadlay
Next articleImaraadka Carabta oo diyaarineysa Qorshihii ugu dambeeyey ee ay ku Raaligalineyso Turkiga.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa tagay xafiiskiisa, kadib markii sida la sheegay Ciidamo ka amar qaata farmaajo oo muddo saacadaha halkaasi joogeen. Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa...
Shacabka Mudisho oo aad uga carooday hadalkii Guddoomiye ku xigeenka amniga...
Nato iyo Ruushka oo laga cabsi qabo inay Ukraine isku faro...
Duleedka magaalada Hamburg oo haweenay lagu dilay
Xukuumadda Somalia & QM oo ka wada hadlay Dhaqaalaha Doorashada
Abiy Axmed oo ku laabtay jiida hore ee dagaalka kana qabsaday...